The Kuroverwa – 2hove
musha / ruponeso / The Kuroverwa
Sezvo muKristu wose anoziva, Jesu akafira zvivi zvedu.
Mushure Kupunzika Man, masuo kudenga avharwa, uye kwakange kure wakaiswa pakati paMwari uye Man. Daro aigona chete kuvharwa kuburikidza chibayiro nemunhu akanga kungova munhu, uye Jesu, kwakanga zvizere-Mwari uye zvakazara-murume.
MuKristu wose anozivawo kuti Jesu akatambura, akarovererwa, akafa akavigwa ... uye pazuva retatu, akamuka zvakare. Rwakadini kutambura zvive zvishoma inonyatsozivikanwa, asi pakadzika kutambura kuti Jesu achizvidira atsungirira kwatiri–tose–Chaizvoizvo atiratidze pakadzika rudo rwake.
Kuti kutambura kunoratidzwa kunoshamisa kudzidza Passion kwake Pierre Barbet, mumwe chiremba ari Saint Joseph Hospital muParis, iro huri mubhuku, A Doctor paKarivhari (Roman Catholic Books, 1953).
Ndanyatsomuongorora nezvokuzadziswa muEvhangeri mumaonero nesayenzi, Barbet reconstructed zviitiko Passion mu inotyisa akadzama. tinodzidza, semuyenzaniso, kuti "iratidzike seiri kubuda ropa,"kana hæmatidrosis, Jesu akatambura muBindu reGetsemane pausiku hwaakasungwa, vakabatsira vake vashoma nokukurumidza rufu pamuchinjikwa (mumaawa anenge matatu). Maererano Barbet, ichi zvemamiriro ezvinhu rinoshandura ganda "nounyoro uye anorwadza, chinoita kuti vasakwanisa atakure uye nokurohwa iyo muchagamuchira usiku uye panguva zvinotevera zuva, mberi kusvikira zvokuzvamburwa uye nekuroverwa " (pp. 70).
Uyezve, Barbet anonzi padanho kwaJesu aikanganiswa marwadzo dzake zvikuru akanatswa tsinga. zvinenge, "Vanhu vane utano ane zvakawanda rakanatswa mhando kutsungirira [marwadzo] pamwe mukuru murefu uye zvavo ndokumisa kurwisa nani, pasi pokudzora munhu noushingi mweya uye kwazvo kunzwisisa " (Ibid.). Zvino zvakaitika Jesu, "Aiva zvakasimba kuda rokutsungirira migumisiro inorwadza kuti rokumavirazuva papi" (pp. 71).
Uyezve, wakati vakaongorora muviri mufananidzo pamusoro Mutsvene Chifukidziro pamusoro nokuTurin kubva anatomical nemaonero, Barbet akapedzisa zvakanga zvechokwadi, chikuru nokuda kwayo asingatsananguriki kubva zvetsika mifananidzo younyanzvi. "A mupfuri wenhumbi,"Akanyora, "Kuti kumwe kana zvimwe vakaita zvimwe zvakakomba vangadai amutengesa. Angadai asina zvaipesana zvinoyevedza tsika dzose unconcern mukuru akadai " (p. 81-82).
chitsamba: ari zvikuru-kuziviswa chidzidzo 1988, mimwe chifukidziro vakanga kabhoni ainyorwa imwe nguva pakati 1260 uye 1390, asi pane Maitiro kunetseka pamusoro yekuedzwa, uyewo mibvunzo pamusoro migumisiro kukuvara moto uye mamwe kusvibiswa kune jira. pamwe chete, izvi zvinoratidza kuti 1988 Zvakawanikwa vaiva pakutsauka.
Kufunga uchapupu chifukidziro mufananidzo muchiedza neuchapupu Rugwaro Netsika, akatungamirira Barbet dzimwe dzinokatyamadza zvakawanwa. Semuyenzaniso, maererano Kurohwa Ishe Vedu, akashuma: "Kune zvakawanda zvinoratidza iyi chifukidziro. Vakapararira pamusoro muviri wose, kubva pamafudzi kusvika rezasi chikamu makumbo. ... Pamwe ini vakaverenga kupfuura 100, zvichida 120 [zvibhakera]" (p. 83, 84).
Pakati Kuroverwa, Barbet akataura imwe "yakanaka panzvimbo" inonzi "Destot kuti nzvimbo,"Imwe nzvimbo yakavhurika" iri pakati mapfupa pamaoko,"Izvo aizobvumira mapfupa kuti" sedzisina [nokuda zvipikiri], asi [ruboshwe] sanganisika " (pp. 102)-zvinoshevedzera kuchengetwa chete uprofita zvakataurwa St. John, "Hapana pfupa huchavhuniwa" (ona Johane, 20:36)."Zvinoita,"Akapikisa Barbet, "Kuti akadzidziswa vaurayi ungadai asina kuzivikanwa chiitiko ichi yakanaka panzvimbo nokuda pamuchinjikwa maoko ... ? Mhinduro yacho iri pachena. Uye nzvimbo iyi chaiyo apo chifukidziro rinotiratidza mucherechedzo chipikiri, ruvara izvo hapana mupfuri wenhumbi vangadai chero pfungwa kana ushingi kumiririra nayo. ... Apo [muMedhia akapiwa tsinga] vakakuvadzwa uye akatambanudza pamusoro zvipikiri avo unoratidzwa maoko, sezvinoita parukungiso ane gitare pamusoro zambuko yavo, Vanofanira kunge akaita chinhu chinosemesa marwadzo " (p. 104-105).